Shirkadda Google Oo Adeegeeda Wax Tarjuma Ku Dartay Afka Soomaaliga * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Shirkadda Google ayaa markii ugu horreysay Afka Soomaaliga ku dartay luqadaha adduunka ee loo adeegsado tarjumaadda.
Shabakadda Google oo bixisa adeegyo badan oo ay ka mid tahay wax barista iyo tarjamada ayaa ku dartay luqadda Soomaaliga qeybteeda (Google translate) ee isku turjunta luqada caalamka.
Adeega Google translate ayaa ka saacidaya qofkii luqad garnaya inuu u fasiro luqada kasta ee u kedysan Google, inakasroo tarjamadaasi aysan aheyn mid buuxda, hase ahaatee ugu yaraan ku fahamsiineysa ujeedada hadalka aad meesha aad gelisay.
Adeega Google translate ayaa marka aad weydiiso hal eray ku siiya tarjamo sax ah, isagoo awood u leh inuu kaa siiyo dhowr micno oo eryagaasu lahaan karo.
Adeeggan cusub waxaa ka faa’iideysan kara qeybaha kala duwan ee bulshada sida Ardayda Jaamacadaha, dadka wax baara iyo kuwa wararka faafiya.